Daa’uuska Afrika- Safarkaygii dheeraa! Q2 | Abdikadir Askar
Daa’uuska Afrika- Safarkaygii dheeraa! Q2
October 10, 2016 February 4, 2018 / Abdikadir Askar(AA)
Khariirada Yugaadha oo lagu xardhay calanka dalka.
Anigga oo shandadaydii riixaya, ayaan u soo baxay barxadda Geggidda Caalamiga ah ee Entebbe. Cabbaar baan hareeraha jeedaaliyey, indhahana la raac-raacay dadka badan ee hortayda tumanaa. Cidna kama aan garanayn! Waxa se markiiba maskaxdayda ku xidhmay muuqaalka i hor imid, ee aan sii malaysanayey. Waa dad madow, dhererka gaabni u badan, oo si fiican uga turjumaya dadyowga Baantuga ah ee Afrika ku dhaqan.
Qofkasta oo indhahaygu qabtaan wuu muraaqaysanaa. Wejiyadoodana waxa aan ka akhrisan karayey weedho aan u fasirtay “Ku soo dhawoow dalkan!”
Waxa aan si lama filaan ah gacanta iigu haadiyey nin dheer oo lebis qurxoon. Waa nin degnaansho iyo kalsooni badan ay ka muuqatey.
“ Waar Askar waad raagteen’e!” ayuu si kaftan leh iigu salaamay.
Waa Cabdixamiid Mohamud Cumar, Rabbi Jannadda ha ka waraabiye, oo gacan ka xaqdarani ku dishay Magaaladda Muqdisho, isaga oo u sama-falaya bulshada Soomaaliyeed ee la tabaalaysan gaajada iyo dawlad la’aanta muddo ka badan labaatan sannadoo. Wuxu ahaa qof dun fiican oo aan mahadiyey tallooyinkiisii tolmoonaa iyo hibaddiisii hoggaamineed!
Gaadhigii noo diyaarsanaa, ayaanu fuulnay. Malahaygu wuxuu I odhanayey in Entebbe ka tirsan tahay magaaladda aan ujeednay ee Kampala. Hal saac kadib ayaan se xaqiiqsaday in ay ahayd magaalo kale.
Entebbe, waa magaalo taariikh fog, kanna fac weyn Kampala. Waanna meeshii ugu horaysay ee uu Ingiriisku ka dhigto xarun maamul. Magaceeduna wuxu ka soo jeeddaa garsoore reer Buganda ah, oo ay fadhiisin u ahayd bilawgii qarnigii 18aad.
Mid ka mid ah dhismayaasha qurxoon ee taxan wadada Entebbe ilaa Kampala.
Malahayga garateen Buganda! Waa dadka ugu badan dalka Yugaadha. Kanna soo jeeda mid ka mid ah boqortooyinka ugu guunsan, uguna ilbaxsan ee soo mara Afrika. Dalku magaciisa boqortooyadan buu ka soo ergistay, luuqadooda labaadna waa Luganda.
Xiisihii aan u qabay daawashadda muuqaaladda dabeeciga ah ayaa ahaa kuwo yaab badan. Markiiba waxa I saaqday neecaw udgoon, oo ka soo afuufmaysay harta weyn ee Lake Victoria, oo kaabiga uun ku haysa Garoonka Entebbe. Markiiba waxa aad malaysanayaa in ay badweyn hortaada fadhido. Waa se harta ugu weyn qaaraddan Afrika, ahna ta labaad ee dunidda.
Waxa wadada hareeraheeda ku ganacsanaya dumar badan oo xambaarsan xidhmooyin muus ah. Bal se dalkan looga yaqaan Matooke. Aniga oo hoosta ka qoslaya, ayaan xasuustay dumarkii Soomaalida, dabadeedna si faduul ah is-bar bar dhig u sameeyey. Dumarka Yugaadha si lama mid ah ragga ayey shaqooyinka culus u qabtaan, uguna dhiiran yihiin. Ragga iyo dumar, dheefsiga nolosha waa loo tartamaa!
Entebbe: Qasriga uu degan yahay Madaxweynaha haatan ee Yugaandha
Cabdixamiid, oo weydiimo ku daaliyey, baa farta iigu fiiqay dhisme farshaxan sarre lagu bineeyey. Haa waa run. Waa daar cad, oo aad u balaadhan, oo qofka gudaheeda ku sugani ku raaxaysanayo biyaha hor galaclaynaya, macaansanayo cododka shimbiraha heesaya iyo laamahaha ruxmaya. Waa hoyga rasmiga ah ee uu degan yahay madaxweynaha Yugaandha.
Waxa wadooyinka si teel-teel ah u joogay ciidan aad u hubaysan, oo ay ka muuqtay kala-danbayn iyo asluub ciidan oo saraysa. Haa dabcan. Waa dal madaxweynaheedu dagaal kula wareegay tallada dalka, kursigana uu isku ilaabay, sida madax badan oo Afrikaan ah.
Wallow markiiba aad dareemayso in kaabayaasha dawligga ah, gaar ahaan wadooyinka si fiican looga shaqeeyey, gaar ahaan inta aanad gaadhin caasimadda Kampala. Haddana taasi waxa ay beenoowda marka aad u sii dhawaato Kampala, ee aad weliba dhex sodcaasho waddooyinkeeda. Kuwaas oo ah wadooyin yar yar oo laba haad ah,oo biyaha daadkuna dul yaacayaan, carro cas oo indhahaagu diidayaana ka sarayso. Waa wadooyin u eeg, kuwa Hargeysa, ee ay cabashadoodu markasta taagan tagan tahay, gaawaadhideenana ‘cimri’ dedejiyey.
Magaaladdii Todobadda Buurood
Waxa aan gaadhay Kampala. Wax la i dejiyey daarta Kakinga, aniga oo soo dhex maray Kabalagala. Waxa lay casho geeyey Kansanga. Warna waxa laygu siiyey in Soomaalida ugu badan magaaladdu, ku sugan yihiin Kasenya. Ku darsoo, KIU ayaanan waxbarasho u soo doontay. Waar miyaanay xaraf aan “K” lahaynba laga aqoon dalkan, baan si hoose isku weydiiyey.
Kampala, waa magaalo ay ku nool yihiin in ka badan laba milyan oo qof. Waxa gashay kaalinta 13aad ee magaalooyinka ugu korniinka dheeraynaya dunida. Qiimayn uu sameeyey ururka laga leeyahay dalka Maraykanka, laguna magacaabo Mercer, wuxuuba ku tillmaamay Kampala, magaaladda ugu nolosha fiican Berigga Afrika, iyada oo ka horaysay magaalooyinka Kigali iyo Nairobi.
Magaaladdu waa magaalo buureed, oo dhinac walba mid baa ka taagan. Waanna meesha ay magaca kala baxday oo afka Luganda ku noqonaysa “Magaaladdii buuraha badnayd”.
Dadka magaaladdan, iyo guud ahaan Yugaadhna, waa dad edeb badan, soo dhawayntana ku wacan. Waxa laysku af-gartaa luuqada Ingiriiska, ahna luuqada koowaad ee dalka.
← Daa’uuska Afrika- Safarkaygii Dheeraa!
Daa’uuska Afrika- Safarkaygii Dheeraa! Q3aad →